Wondershare PPT2DVD Pro Ihuenyo Ọmụmaatụ - PowerPoint ka DVD Utilities
Mepụta instructional video na Wondershare PPT2DVD maka egwu na dijitalụ signage Player jirichaa azụmahịa gị ikpughe na ibe azụmahịa gị.
Kpọsaanụ gị ngwaahịa n'ụdị DVD ma ọ bụ video na ala.
Mee ọkachamara ngwaahịa ngosi mgbe ahụ tọghata ya DVD ma ọ bụ video na Wondershare PPT2DVD maka etinye ya na TV ihuenyo ofụri ngosi Ụlọ Nzukọ, Ahịa, na ụlọ oriri na ọṅụṅụ.
Ọkụ gị ụtọ na-echeta site PowerPoint ka DVD na video na ịkọrọ ya ezinụlọ na ndị enyi na TV ma ọ bụ YouTube.
Anyị na a na-arụ ọrụ na-esi nke kasị mma nke gị foto echeta site na-agbakwụnye mgbanwe mmetụta na DVD menus nke dakọtara na oge zuru okè.